umphengululi Islamic uthi Bitcoin iyahambelana phantsi komthetho elifuna - Blockchain News
umphengululi Islamic uthi Bitcoin iyahambelana phantsi komthetho elifuna
Isibhengezo yakutshanje ngumntu umphengululi Islamic Bitcoin iyahambelana nomthetho elifuna unobangela emva yanamhlanje $1000 ixabiso kwesidingo, ukuvula imarike kubatyali-Muslim abo awuqinisekanga ngaphambili ukuba cryptocurrency uyafaneleka imali phantsi komthetho elifuna.
Bitcoin uwela phantsi iinkcazelo ezithile imali ngomthetho elifuna - nantoni na uba yamkelwe njengoko lwemali ngokubanzi kuluntu okanye igunya likarhulumente.
Mufti Muhammad Abu Bakar, kumcebisi elifuna kunye negosa ukuthotyelwa kwi Blossom Finance e Jakarta, apapasha sigqibo iphepha ukuba kwiimeko ezithile, Bitcoin siya kuba Halal (kuvunyelwe).
An ngcali ufunde:
"Ngo Germany, Bitcoin ibonakaliswa njenge lwemali ngokusemthethweni ngoko enelungelo imali Islamic ku Germany. Kumazwe afana ne-US, Bitcoin uswele ngokomthetho yemali ezisemthethweni kodwa yamkelwe intlawulo kwi ezahlukeneyo abarhwebi, kwaye ke ngoko enelungelo nemali wesintu yamaSilamsi. "
Ngaphezu, Bitcoin nobugcisa blockchain ukulungelelanisa kakuhle elifuna ideology. zebhanki reserve fraction apho ubunini imali obandakanyekayo na isiphumo “mboleko neenqobo” (nibiza) Akuvunyelwe. Ngenxa blockchain abawabona kubonisa ubunini, nguwe kanye iyahambelana ngakumbi elifuna ngaphezu zebhanki, yaye oku konke kufakwa kwiphepha epapashwe yi Mufti Muhammad Abu Bakar.
Odolo Payment St ...
Post Previous:Baidu uqala platform kwemfuyo photo blockchain-based
Post Next:Indian crypto exchange Coinsecure igqekeziwe